ब्लड बैंकको जानकारी इन्टरनेटमा | चितवन पोष्ट दैनिक
ब्लड बैंकको जानकारी इन्टरनेटमा
२०७० माघ २६, आईतवार ०२:३१ गते
भरतपुर । उपचारका क्रममा रगत आवश्यक पर्न सक्छ । अस्पतालले रगत ल्याऊ भनेपछि रक्तसञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) जानै प¥यो । त्यहाँको कर्मचारीले पनि रगत भए नभएको विवरण हेर्नु प¥यो । तत्काल चाहिने रगत खोज्न बेर लाग्न पनि सक्छ, तर जीवन जोगाउन अत्यावश्यक रगत तत्कालै दिने तयारी ब्लड बैंकहरुले गर्दैछन् ।
चितवन भरतपुरमा रहेको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले बनाउँदै गरेको सफ्टवेयर रेकर्ड राखेपछि रगतका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सवै विवरण खोज्न कुनै झन्झट बेहोरिन नपर्ने हुनेछ । ‘वेब वेस’मा आधारित सो सफ्टवेयरका कारण ब्लड बैंकका कर्मचारीले मात्रै नभएर सर्वसाधारण सवैले पनि विवरण हेर्न पाउने सुविधा रहनेछ ।
‘हामीले बनाउन लागेको सफ्टवेयरमा कसले रगत दियो ? कति पटक रगत दियो ? कुन समूहको रगत कति जम्मा भयो ? कुन समूहको कति रगत बाहिर गयो ? जस्ता विवरणहरु राख्ने छौं । पहिला रजिष्टरमा राख्ने विवरण अब सवै कम्प्युटरमा हुने छन्’ क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले भने ।
कुन केन्द्रमा कुन समूहको रगत छ सबै विवरण उपलब्ध हुनेछ । ‘कसैलाई फ्रेस ब्लड चाहियो भने हाम्रो वेबसाइटमा गएर मिल्दो रक्त समूहका व्यक्ति खोजेर आफै सम्पर्क गर्न सक्नेछन्’ केन्द्रका प्रमुख पौडेलले भने । नेपालमा यसरी विवरण राख्न लागेको पहिलो पटक हो । केन्द्रीय ब्लड बैंकका निर्देशक डा.मनिता राजकर्णिकारले सवै ब्लड बैंकले यही सफ्टवेयरमा रेकर्ड राख्ने बताइन् ।
नेपालमा रेडक्रस सोसाइटीले विस २०२३ सालदेखि ब्लड बैंक सञ्चालन गरेको हो । हाल देशका ६२ जिल्लामा ८६ वटा ब्लड बैंक सञ्चालनमा छन् । सवै केन्द्रको विवरण अब सवंैको पहँुचमा हुनेछ । यसले बिरामीलाई समयमै रगत उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने केन्द्रीय ब्लड बैंकका निर्देशक राजभण्डारीको भनाइ छ ।
भरतपुरको ब्लड बैंकको सुधारका लागि कोरियाली स्वयम्सेवीहरुको संस्था (कोइका) कार्यरत छ । कोइकाको सहयोगमा भरतपुर ब्लड बैंकले सफ्टवेयर तयार गर्न लागेको हो । ‘यो सफ्टवेयर तयार भएपछि सवै ब्लड बैंकले यो प्रयोगमा ल्याउने छन् । सर्वसाधरणले वेबसाइटमार्फत विवरण हेर्नेछन्’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चितवन शाखाका सभापति हरिप्रसाद न्यौपानेले भने ।
काठमाडौंको विजनेश इन्टेलिजेन्स एकेडेमी (विआईए) ले सफ्टवेयर बनाउन लागेको हो । पाँच महिनाभित्र सफ्टवेयर तयार हुने विआईका निर्देशक सन्तोष कर्णले जानकारी दिए । ‘यसमा ब्लडसँग सम्बन्धित सवै जानकारी समेटिनेछ । आवश्यक ब्लड अस्पतालहरुले अनलाइनमार्फत नै माग गर्न पनि सक्नेछन्’ निर्देशक कर्णले भने ।
नेपालभरका ब्लड बैंकमा गत वर्ष एक लाख ७७ हजार १९५ युनिट रगत संकलन भएको थियो । संकलित एक युनिट रगतबाट त्यसमा रहेको विभिन्न तत्वहरु छुटएर जसलाई रगतको जुन तत्व आवश्यक परेको हो त्यही दिने परिपाटी छ । यसरी गत वर्ष दुई लाख ४९ हजार ७३३ युनिट रगत वितरण भएको रक्तसञ्चार केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।